Resaky ny mpitsimpona akotry : lany andro tsy hamokatra | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : lany andro tsy hamokatra
Par Les Nouvelles sur 10/10/2017
Miala an’Ankatso dia Ambohidempona. Entina hilazana izany fa tsy misy fitsaharana ny làlan-tsarotra lavitra ezaka. Tsy tafanika ny iray dia io manangasanga sahady ny dezaka manaraka. Ny hery anefa toa lany mialoha eo am-piresahana ny adiady ifamaliana ary rehefa mandroatra noho izany aza dia tsy ilaozan’ny fifamingampinganana.
Ny ady atao amin’ity aretina mamohehatra atao hoe pesta ity anefa dia tsy misy mazava.
Araky ny fanazavan’ny minisitry ny Fahasalamana dia ny piti-drora sy fofon’aina hono no tena lalan’ny famindrana an’io aretina io. Tsy ilay pesta mifindra noho ny kaikitra parasy izay mampiditra an’ilay otrik’aretina any anaty ra, fa mikasika an’ity pesta ity dia any amin’ny havokavoka no mamely ilay otrik’aretina izany hoe izy io dia mitera-doza rehefa sendra azy maniditsidina anaty rivotra fofoina. Ny voalavo moa no tena manely parasy mitondra an’ilay aretina iray. Momba ity pesta pilmônera ity kosa dia ny samy olona no mifamindra mivantana. Tsy fantatra anefa iza no tena mitondra an’ilay otrik’aretina raha tsy efa miseho ilay aretina izay raha tsy tsara tsabo dia vetivety dia mamono. Sarotra noho izany hoy ingahy Minisitra ny fitondrana fanefitra an’ilay aretina. Aiza moa ny zavatra iraisana mihoatra ny rivotra manidina. Ilay tampim-bava ve dia ampy ho sakana, raha toa mifanena amin’ilay otrika dia tsy ho lasa trano itoerany ve izy ireny ?
Rariny noho izany ny fanaovana fanentanana ny mponina mba ahafantaran’ny rehetra ny fepetra tsy maintsy raisin’ny tsirairay hiarovany ny tenany sy ny manodidina azy. Fantatra arak’izany koa fa ambohitra amin’ny tanan-dehibe fa tsy any ambanivohitra no miely ity aretina ity. Eto Antananarivo sy any amin’ny renivohi-paritra rehetra izany dia mety hisy fifanenana amin’ilay aretina isak’izay mivoaka ivelan’ny trano. Ary rehefa tena miparitaka ilay aretina dia tsy fantatra intsony fa na ao antokotany dia efa mety aniditsidinany ka raha misy varavarana mivoha dia na ny ao an-trano aza dia mety ho tsidihany.
Mananontanona ny loza, mahatonga fahatezerana noho izany ny fahenoana an’ireo tompom-pahefana isan-karazany sy isan-tsokajiny mandany fotoana eo amin’ny fifanilihana andraikitra. Tsy tokony hampihorohoro ilay aretina raha toa samy mahafantatra ny andraikitra tokony ho nataony ny rehetra avy any an-tampony hatraty amin’ny mponina tsirairay. Zavatra hafa anefa no ataon’ny sasany anton-dresaka ka ny vahoaka dia miaina amin’ny honohono sy tsaho miparitaka toy ilay otrik’aretina.